Faruuraha guudan iyo qaylada dumarka – Somali News
Faruuraha guudan iyo qaylada dumarka
February 4, 2018 suldaan GALMADA IYO RAAXADA 0
Dumarka faruuraha guduudan leh iyo qaylada shaqo miyay isku leedahay hadalkan akhri yaabka badan oo raaxada soo koobay.
Shabakada oo soo tarjumeeso daraasad ay soo saareen dhaqaatiir ku xeel dheer arimaha galmada iyo dareenka xaruntooda tahay dalka USA
ragooda in ay ku dareen galiyaan qaabka ay u dhuuqayaan jaalatada taas oo la micno ah in ay xaaskaaga habeenkaas aad kuugu baahantahay.Cunista jalaatada waa qeyb kamid ah dooqa dumarka, waana kuwa ugu badan ee cuna jalaatada marka laga soo tago caruurta, qofka isticmaala jir ahaan wuu ka dabacsanyahay jaalatada inta badan waxay sababtaa in uu qofka cayilo.
F.G:Hadii uu ninkaagu arko adoo sidii Alwaaxii iska yaala Sariira isna uu dadaal ugi jiro in uu kugu qanciyo in aad hesho raaxo macaan adna adaan muujin sida ad ugu macaansaneyso shaqada Lamaanahaaga , taasi waxeey keeni kartaa in uu iska dhaadhiciyo in uu yahay qof wax-matare mar ah,waxaan aka dhalan karo niyad jab ku yimaado in uu nolosha kula sii qeyb sado ama uu iska dhaadhiciyo waxyaabo dhaawici karo mustaqbalkiina.Dumaryahow ogaada in raggiinu ay jecelyihiin xiliga galmada xalaasha ah in ay maqalaan riinka ka dhsaha macaansiga galamada .
(Daawo Sawirro) Maxay ka wada hadleen Ing. Yariisow & Madaxda Waaxyaha G/Banaadir?
Gabar nin baray galmada futada qiso yaab leh